Ị nọ ebe a: Home / Archives maka ụlọ mposi
15 / 06 / 2015 By Roger Pilon 22 Comments
Kenya - Ụlọ mposi ọha na eze na mba ụwa nke atọ na-abụkarị ọdachi zuru ezu. Ha bụ ajọ ntụpọ, nke jọgburu onwe ya ma dị njọ. Ugbu a, a na-edozi ebe nchekwa dị ugbu a. Dabere na ihe dị ịtụnanya maka usoro ego nke Sanergy.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Ihe Ngwọta Ọdịmma Tagged With: ụlọ mposi, Kenya, ụlọ mposi ọha na eze